Cristiano Ronaldo Oo Kooxdiisa Real Madrid Ka Dalbaday In Mushaarkiisa Lala Simo Lionel Messi | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Cristiano Ronaldo Oo Kooxdiisa Real Madrid Ka Dalbaday In Mushaarkiisa Lala Simo Lionel Messi
Xidiga xulka qaranka Portugal iyo kooxda Real Madrid ee Cristiano Ronaldo ayaa soo qaatay habeen kale oo farxad u lahayd waayihiisa ciyaareed kadib markii uu Los Blancos ka soo caawiyay in ay labada lugoodba la sii gashay afar dhamaadka UEFA Champions League isaga oo laba gool ka soo dhaliyay kulankii Juventus ee lugta hore ee siddeed dhamaadka UCL.
Cristiano Ronaldo ayaa heer kale u qaaday gool dhalintiisa sanadkan 2018 isaga oo ka dhigay 24 gool kadib markii uu 14 kulan soo ciyaaray wuxuuna hadda si buuxda oo cajiib ah uga soo kabsaday bilo badan oo uu dhibaato ku soo dhex jiray qaybtii hore ee xili ciyaareedkan.
Haddaba markii uu Ronaldo guusha ku soo hogaamiyay kooxdiisa Real Madrid ee uu markale muujiyay sida uu hormood ugu yahay kooxda Zidane waxa uu dalab u diray maamulka kooxdiisa Madrid isaga oo doonaya in ugu danbayn mushaarkiisu u la mid noqdo kan ninka ay xifiltamaan ee Lionel Messi.
Wargayska Don Balon ee dalka Spain ka soo baxa ayaa shaaciyay in Ronaldo uu maalmulka kooxdiisa Madrid u diray dalab mushaar kordhin ah kaas oo ah mid muddo dheer soo jiitamayay isla markaana uu xidiga ree Portugal ku doonayo in mushaarkiisa si wayn sare loogu qaado.
Ronaldo ayaa heshiis cusub u saxiixay Madrid bishii November 2016 laakiin tan iyo markii Neymar Jr ku biiray PSG ee mushaarka waalida ah loo qoray isla markaana ay Barcelona heshiiska waqtiga dheer ah ka saxiixatay Messi ee mushaarkiisa todobaadkii laga dhigay 500,000 kun oo gini ayuu Ronaldo bilaabay in aanu ku qancin qandaraaska uu Madrid ku joogo.
Don Balon ayaa sheegay in Ronaldo uu fariin u diray boodhka kooxdiisa Real Madrid wuxuuna ka doonayaa in mushaarkiisa kala badhka kan Neymar Jr iyo Lionel Messi ka ah in sare loo qaado isaga oo ku qanacsan in uu u qalmo in xidigahan uu la mushaar noqdo ama uu ka bato balse aanu u qalmin mushaarka uu hadda qaato.
Si kastaba ha ahaatee, Real Madrid ayaa wali u muuqata mid ka cago jiidaysa in ay hirgaliso dalabyada Cristiano Ronaldo ee tan iyo bilawgii xili ciyaareedkan soo jiitamayay ee ahaa in mushaarkiisa sare loo qaado wuxuuna 33 sano jirkani wali sii wataa qaab ciyaareedkii uu Madrid kaga soo jiray tan iyo 2009 kii markii uu Man United ka soo wareegay.
Way Ku qasban tahay realmadrid inay ukordhiso waa yo hadii kale Iyada ayuu ceebaynaya marku koox kle usoo ciyaaro